Atọ uwe kachasị mma di na nwunye
Pizza Di na Nwunye
Pizza Di na Nwunye Sweatshirt
T-uwe Pizza Di na Nwunye
Eze na Queen Di na Nwunye
Hubby Wifey Di na Nwunye
Mazị Di na Nwunye Hoodies
King na Queen Di na Nwunye Sweatshirt
Hubby Wifey Di na Nwunye Sweatshirt
Mazị Di na Nwunye Sweatshirt
Eze na Queen T-uwe elu Di na nwunye
Mr Mrs Di na Nwunye T-shirt
OVH CouNANYA Di na Nwunye
OVH CouNANYA Di na Nwunye Sweatshirt
H CouNYA Di na Nwunye Di na Nwunye
Nọ na mmekọrịta bụ mmetụta kacha mma n'ụwa. Mgbe ị nọ na mmekọrịta, ị hụrụ di ma ọ bụ nwunye gị n'anya; mgbe ahụ, i kwesịrị igosipụta ịhụnanya gị maka ya. Ọtụtụ mgbe, anyị anaghị ama na igosipụta ịhụnanya dị mkpa ka ịhụn’anya. Ishụnanya bụ ogidi nke mmekọrịta ọ bụla, nke na-enye ya ike.
E nwere ụzọ dị iche iche isi gosipụta ịhụnanya gị dịka ị nwere ike inye okooko osisi, ihe egwuregwu ụmụaka na ihe egwuregwu dị iche iche. N'elu ha, uwe niile dabara adaba maka di na nwunye gị nwere ike bụrụ onyinye kacha mma n'ihi na enwere ike ịchekwa uwe ndị ahụ ogologo oge. Can nwere ike hazie ndị akenha ekike maka di na nwunye gi maka oge di iche iche. N'ebe a, anyị ga-atụle echiche atọ maka uwe dị iche iche dịka ihe omume ọzọ si dị.
1. maka ịse foto.
Agbamakwụkwọ bụ nkwa kachasị ike n'ụwa a. Onye ọ bụla na-eche ụbọchị agbamakwụkwọ ya ọkụ ọkụ ma chọọ ime mmemme ụbọchị ya nke ọma. Maka agbamakwụkwọ, anyị nwere ọrụ dị iche iche tupu na ụbọchị agbamakwụkwọ. Wedse foto mgbe ochie bụkwa ọrụ dị oke mkpa dị ka foto agbamakwụkwọ. Oge ịse foto a na - egosipụta mmetụta na ọ joyụ gị, na uwe dabara adaba ga - agbakwunye ọtụtụ na mmetụta na obi ụtọ a. Nwere ike iyi otu uwe ahụ, otu nwere okwu "Mr" na nke ọzọ na okwu "Oriakụ" Dika foto foto ndi a bu ihe ncheta ebighi ebi, uwe ndi ozo g’enwe obi uto na obi uto ndia.
2.Maka nri abalị.
Maka ndị di na nwunye, ụbọchị bụ ụzọ dị egwu iji nwee ọ companyụ na ụlọ ọrụ ibe ha. Ọ na-eme ka di na nwunye nwee oge ha ga-eji nọrịa. Ọ na-enye ha ohere ịghọta nhọrọ na nhọrọ nke ibe ha.
Ikpokọta ekike nwere ike ịrụ ọrụ dị mkpa na ụbọchị ụbọchị gị n'ihi na ị nwere ike ịkọwa mmetụta nke ịhụnanya site na uwe ndị a ahaziri. Uwe ndị a na-eme ka mmekọrịta dị n’etiti di na nwunye. Imirikiti oge, anyị anaghị ekwupụta mmetụta anyị n'okwu; n'oge a, anyị nwere ike iji uwe ndị a gosipụta mmetụta anyị.
3.Maka njem ọnụ.
Travelga njem bụ ihe kacha amasị ọtụtụ ndị mmadụ. Ọtụtụ ndị di na nwunye na-ahụta obi ụtọ ha n’ịga ebe dị iche iche. Ga saịtị dị iche iche na-enye ha ohere iji nọrịa. Abịa ekike nwere ike zuo ezu njem ha. Uwe ndị a na-enye ha mmetụta nke nkekọ.
Egwuregwu t-uwe elu, ihe mkpuchi isi, na ejiji nwere ike ịbụ ihe nkwado maka ịhụnanya di na nwunye ahụ. Nwere ike iyi uwe ndị a n'oge dị iche iche.
Post oge: Apr-08-2021
Kedu ka anyị si dị mma
Otu ụlọ oriri na ọ Austụ Austụ Austin na-enye nri t ...
Ihe mere di na nwunye ji eyi uwe dabara adaba
Kedu otu T-shirts di na nwunye bụ onyinye kachasị mma